D Cup WM Dolls 140CM Thin Waist Gabriela Skin Skin
Save 26%$ 1,199.99$ 1,599.99
Gabriela ndabere akụkọ:
Gabriela bụ TPE nwa bebi nwere ogo 140cm. Mgbe ọ bịarutere n'ụlọ m, m tụrụ aro ka ọ lọta nwa oge. O kwetara ma soro m. Ozugbo ọ batara, m jidere amụ ya ma gwa ya ihe m chọrọ. O kwuru na ọ dị ya otú ahụ, ya mere, anyị malitere ịdọwa uwe ibe anyị. Mma nda enye n̄ka bed mi. Naanị ya nwere otu uwe elu.